Hery - Tsiky dia ampy | Martsa 2014 |
Selfie miaraka amin'ny akondro
2014-03-27 @ 10:14 in Manala azy
Tsisy lazaina aho androany fa mba tsy aritro fotsiny dia napetrako eto ny sary (au lieu de hapetraka any amin'ny facebook lol).
Ah, raha manana koa ianareo dia alefaso fa hanaovantsika album manokana mihitsy loll
Paozy maromaro mihitsy...
Samy lanaka avy eo (fa zay tsy nalainy sary loll)
Fihirana Katolika amin'ny IOS (iPhone)
2014-03-17 @ 10:18 in Blaogy Dev, Finoana sy Fivavahana
Efa herintaona mahery izay no nivoaka ny Fihirana Katolika amin'ny Android, efa an'arivony no mampiasa azy. Betsaka nefa ny antso sy ny hafatra tonga taty amiko ny mba hanamboarana ny fihirana katolika ho an'ny iPhone sy iPad ihany koa. Araka ny efa nolazaiko hatramin'izay dia tsy maintsy amin'ny ordinatera Macintosh vao afaka manamboatra "app" ho an'ny iPhone na iPad. Noho ny mbola tsy fahafahako manana Mac (teneno aho raha misy hanome fanomezana) dia aleo havoakako eto ny "structure"-n'ny "base de données" ampiasaiko ka izay vonona hanamboatra app dia afaka manao izany.
Ny structure ihany no avoakako ka rehefa vonona ilay app dia afaka mangataka aty amiko ny données feno izay nanamboatra azy. Marihina fa mila arahina ilay structure mba hahafahana manome ny "mises-à-jour" rehefa misy fanitsiana amin'ny hira.
Alaivo eto ny SQL: Fihirana_katolika.sql
Alaivo eto ny Diagramme: Fihirana Katolika.png
2014-03-14 @ 16:12 in Fiaraha-monina
Tandremo sao voafitaka ianao fa heno izao fa efa Malagasy maro no voafitaka tsy misy indrafo, lehilahy no ankamaroany, ary rehefa tratrany dia mijafajafa mihitsy. Tsy Malagasy ihany fa ny vazaha koa indrindra indrindra. Amin'ny voalohany aloha ianao ampisehoany zavatra mbola tsy hitanao mihitsy toa tena mahaliana kay fitaka... (Teny fampidirana fotsiny io mba hiseho eo amin'ilay teny famintinana any amin'ny facebook)
Fitaka voalohany. (tohiny)
HatsarÃ na be vata
2014-03-04 @ 14:51 in Sarimihetsika
Fomba fiteny ilay "be vata" izay fampiasa any atsimo midika hoe Goavana ary naverimberin'ny pro-JLR nandritra ny nilazàny fa nisy hosoka ny fifidianana farany teo. Tsetsatsetsa tsy aritra iny fa tsy nandiso fanantenàna firy ny vokatry ny Oscars tamin'ity 2014 ity. Nahafinaritra ahy avokoa ireo horonantsary nandresy sy ireo mpilalao nahazo loka. Na izany aza anefa dia somary tara kely ihany aho tamin'ilay "La Grande Bellezza". Tsy mbola hitako ilay (tohiny)